Amnesty: Jirdilka oo ku badan Afrika - BBC News Somali
Amnesty: Jirdilka oo ku badan Afrika
Image caption Jirdilka
Hay’ada u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, ayaa sheegeysa in adeegsiga jirdilka uu aad ugu badan yahay qaaradda Afrika, oo jirdilka aanu mamnuuc ka aheyn inta badan dalalkeeda.
Hay’ada ayaa baaritaan ballaaran ka sameysay 140 dal oo dunida ka tirsan.
Amnesty International ayaa diiwaangelisay noocyo badan oo jirdil ah oo ka dhacay Afrika.
Xabsiyada iyo goobaha dadka lagu hayo ayay hay’adu sheegtay in jirdilku yahay qaab inta badan loo adeegsado si dadka xiran wax looga sheegsiiyo.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in waddamo ay kamid yihiin Itoobiya, Gambia, Kenya, Mali, Nigeria, Senegal, Sudan iyo Zimbabwe, dadka xabsiyada ku jiro la garaaco, si xun loo xiro, laguna hayo goobo ay cimiladoodu xuntahay, isla markaana loo geysto xadgudubyo dhanka galmada ah.
Amnesty ayaa sheegeysa in toban dal oo Afrika ku yaalla keliyah ay meel mariyeen sharciyo mamnuucayo jirdilka, inkasta oo ku dhawaad dhammaan waddamada qaaradda ay saxiixeen heshiiska xuquuqda aadanaha ee mamnuucaya jirdilka.
30 sano kadib
Sanadkan 2014-ka, oo ay ka soo wareegatay 30 sano markii ay Qaramada Midoobay ansixisay heshiiska caalamiga ah ee ka dhanka ah jirdilka, kaas oo ku qasbaya dowladaha caalamka in ay jirdilka ka hortagaan, ayay Amnesty International sheegtay in ugu yaraan 24 dal oo ka hooseeya saxaraha uu weli caadi ka yahay jirdilka.
Dowladaha dalalkaasi ayaan weli jirdilka u aqoonsan inuu dhibaato yahay.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in boqolkiiba 58 dadka Kenya ay ka cabsadaan jirdil, halka boqolkiiba 50 dadka Nigeria ay cabsi taa lamid ah qabaan marka la xiro.
Inta badan dadka su’aalaha ay weydiisay Amnesty International ayaa sheegay in ay doonayaan sharci cad oo looga hortagayo jirdilka.
Amnesty:Qaxootiga waa lagu xad gudbay
12 Abriil 2014
Kenya oo "cadawtinimo" u haysa qaxootiga
Amnesty oo ka walaacsan barakacayaasha
13 Sebtembar 2013